DOWNLOAD TP-LINK TL-WN721N ỌKWỌ ỤGBỌ ALA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Onye ọ bụla na-arụ ọtụtụ ọrụ n'ụbọchị. Ọ dị ezigbo mkpa ịghara ichefu ihe ọ bụla ma nwee ohere ịtụrụ ime, mana ịme ihe niile dị n'isi gị dị ezigbo ike. Mee ka ndụ dịkwuo mfe maka mmemme pụrụ iche maka ịme atụmatụ. Ha ga-enye aka kesaa omume, ịhazi ma dozie ha, yana ichetara gị nzukọ dị mkpa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. N'isiokwu a anyị ga-ele ọtụtụ n'ime ndị nnọchite anya kachasị mma nke ngwanrọ a.
Mbụ tụlee akwụkwọ ụbọchị. Usoro a na-enye gị ohere ịme ndokwa maka oge ụfọdụ, na-agbakwụnye ihe ọhụrụ ọhụụ n'ebe ahụ. Ọ nwere oge e wuru na ya, ọ bụ naanị onye ọrụ ka ịtọ oge na-ahapụ Ụbọchị Ụbọchị na, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-enweta ọkwa maka oge awapụtara.
Na mgbakwunye, onye nnọchiteanya a na-enye ọrụ nke ịmepụta kọntaktị, nke ga-aba uru dị ukwuu nye ndị na-arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ, na-eme ndokwa na mkparịta ụka. Ntọala sara mbara ga - enyere aka ịhazi interface na arụmọrụ nke mmemme ahụ n'otu n'otu maka onwe gị. A na-ekesa akwụkwọ ederede n'efu n'efu ma dị maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti.
Downloadbook Book Download
LeaderTask bụ otu n'ime usoro kachasị mma na ntụziaka kpuchiri n'isiokwu a. Na ya, ịnwere ike ịhazi oge gị ngwa ngwa na ngwa ngwa, jiri ọtụtụ ngwaọrụ na ọrụ rụọ ọrụ. Na mgbakwunye, ndị mmepe na-enye ndị ọrụ ọtụtụ usoro na ndị nhazi maka ọrụ ụfọdụ sitere n'aka ndị a ma ama.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere itinye onwe gị n'ọnọdụ ụfọdụ maka otu ụbọchị, chịkọta ha site na mpaghara, dịka ọmụmaatụ, iche maka ụlọ na ọrụ, chekwaa data na ọrụ igwe ojii ma rụọ ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche n'otu oge, mekọrịta ha na ibe ha. A na-ekesa LeaderTask maka ụgwọ, yabụ anyị na-atụ aro ka ị buru ụzọ budata ma mara onwe gị na mbipute ikpe ahụ, nke ịnweta ohere ụfọdụ, mana nke a anaghị egbochi anyị ịghọtacha atụmatụ niile nke ngwanro ahụ.
Usoro dị mfe ma dị mfe Doit.im na-enye ndị ọrụ iji mepụta ọrụ ma jikwaa ha rụọ ọrụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtọ oge ọrụ, melite ọkwa, na nata akụkọ kwa ụbọchị banyere ọrụ ndị na-abịanụ ma wuchaa. Tụkwasị na nke ahụ, enwere usoro ịmekọ ihe ọnụ, ịmepụta ọrụ iche iche na nkwụsị nke otu ọrụ dị mgbagwoju anya na ọtụtụ ọrụ dị mfe karị.
Ọ bara uru ịṅa ntị na nchịkọta blanks, ebe e nwere isi ọrụ dị iche iche. N'ihi ọdịdị a, ị nwere ike ịgbakwunye okwu ndị dị mkpa ngwa ngwa naanị otu ụbọchị. Nchịkọta a nwere ike ịgbagha, onye ọrụ ọ bụla nwere ikike ịgbanwe, wepụ ma ọ bụ gbakwunye ihe ọ bụla na ọbá akwụkwọ a.
Onye nnọchiteanya ikpeazụ n'ime ndepụta anyị ga-abụ MyLifeOrganized. Usoro mmemme a yiri nke gara aga, ma e nwere ọtụtụ ọdịiche dị iche. N'ebe a, e nwere njikọ na Russia ma e wuru ya na ndezi maka ịhazi ikpe maka ewu na algorithms. O kwesiri iburu n'uche na ufodu n'ime ha adighi akwado asusu Russian.
MyLifeOrganized interface dị mma ma kensinammuo. E nwere ihe niile dị mkpa, nyocha ihe nzacha na ihe ndị ọzọ ga-abara onye ọrụ uru mgbe ị na-arụ ọrụ. N'ụzọ dị mwute, a na-ekesa ngwanrọ a maka ego, ma ị nwere ike ibudata nkwụsịtụ ikpe maka nyochaa tupu ịzụta.
N'isiokwu a, anyị lere anya n'ọtụtụ n'ime ihe omume kachasị mma ma kacha mma nke nyere gị aka ịhazi maka oge ụfọdụ. Ndị nnọchianya niile dịka ibe ha, Otú ọ dị, ndị ọrụ nwere ike ịchọta ọrụ ha pụrụ iche na-egosi ọdịiche dị iche iche site na ndị ọzọ niile. Nbudata ma wụnye mbipute ịchọrọ ma mee atụmatụ ụbọchị gị n'ụzọ ziri ezi.